Waa maxay LEGO Boost: Tilmaame si aad si qoto dheer ugu ogaato - Ikkaro
Inicio >> Alaabada >> Waa maxay LEGO Boost
LEGO Boost waa xirmo robotik ah oo loogu talagalay carruurta oo ku saleysan qaybaha LEGO.. Waxay ku habboon tahay LEGO iyo Techno dhaqameed, markaa waad u isticmaali kartaa dhammaan qaybahaaga shirarka mustaqbalka.
Kirismaskan Saddexdan Caqliga leh waxay gabadhayda 8 jirka ah siisay LEGO® Boost. Runtu waxay tahay inaan arkay wax yar ka hor. Ma aanan dooneynin inaan gabadheyda u soo bandhigo arimo murugsan, laakiin iyadu way weydiisaneysay muddo dheer runtuna waxay tahay in waaya-aragnimadu ay aad u wanaagsaneyd.
Waxaa lagula talinayaa carruurta da'doodu tahay 7 ilaa 12 sano jir. Haddii carruurtaadu u barteen inay ku ciyaaraan LEGO, kulanku wax dhibaato ah ma keeni doono. Waadna arki doontaa inta udhaxeysa astaamaha barnaamijka iyo sharaxaada qaar ee adiga kaa imanaya, waxay isla markiiba baran doonaan sida loo isticmaalo barnaamijka xannibaadda.
Qiimuhu waa qiyaastii € 150 waad awoodi kartaa halkan ka iibso.
Muxuu ka kooban yahay?
Waxay ku saleysan tahay 3 leben ama qaybo waaweyn:
Xarunta ay ku jirto Bluetooth iyo xarun leh 2 matoor.
Mashiinka labaad ee dibedda
ka dibna dareeraha midabka iyo masaafada.
Kalfadhiyada ku soo dhaca tilmaamaha waxaa lagu sameeyaa saddexda qaybood. Laakiin kuwani waa kuwa ugu waaweyn maxaa yeelay waa xoogagga wada. Mid kasta oo ka mid ah dadka kale waa la beddeli karaa, laakiin qaybahan firfircoon ayaa lagama maarmaan ah.
Haddii aad iibsato, soo hel wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato isaga Dhaqaaq hub
5ta gole ee la sharaxay waa sida soo socota. Mid kastaa wuxuu la yimaadaa shaashado kala duwan, taas oo aad ku dhejisanayso qalab cusub oo aad furayso qalab cusub oo barnaamij ah. Ilaa aad ka kordheysid oo aad xaqiijineyso in aasaaska uu shaqeynayo, kuuma oggolaan doonaan inaad horay u socoto.
Waa jaantus heer sare ah, midka maskaxda ku soo dhaca marka qof kastaa ka fikiro LEGO® Boost, maxaa yeelay waa aalado leh qaab "dadnimo". Waa mowqifka inta badan na xusuusinaya fikradda aan dhammaanteen maskaxda ku hayno robot.
Waa madadaalo aad u weyn. Vernie waxaan ku xakameyn karnaa dhaqdhaqaaqiisa, horay iyo gadaal ayuu ugu sii socdaa wuxuuna isku rogayaa naftiisa, dhidibkiisa taagan. Sidan ayaan uga dhigeynaa mid meerto ah.
Ma dhaqaajiyo gacmihiisa. Waxaan ka dhigi karnaa inuu alaabta gacanta ku soo qaato. Iyo muuqaal qabow oo ka mid ah qalabka ayaa ah inay noo oggolaaneyso inaan toogno calaamadda LEGO, sida mashruuc.
Qalabku wuxuu la yimaadaa Playmat, khariidad la qiyaasay markaa waan ka wareejin karnaa aaladda.
Muuqaal aad u qosol badan oo ay gabdhuhu jeclaayeen. Ma dhaqaaqdo, waxay dhaqaajisaa madaxiisa iyo dabada waxayna la falgashaa dhaqdhaqaaqyo gaar ah, midabbo, codad, iwm.
Xilligan la joogo, iyadoo 2 gole ay harsan tahay, waa tan aniga sida ugu yar ii saameysay. Waan niyad jabay waxaanan u maleynayaa in dhibaatada ugu weyni ay tahay in wax macluumaad ah oo ku saabsan baloogyada oo aanad garanaynin mid kasta waxa loogu talagalay, ma garanaysid sida loo isticmaalo mar la ururiyo iyo sida loola macaamilo.
Muuqaal ahaan waa mid aad u qabow waxayna sidoo kale kudayacaysaa waxa xarashku ku sameeyo koodhadh midab leh masaafada iyo dareeraha midabka iyo adeegsiga kabayaal kala duwan si loogu hawlgeliyo saamaynta matoorrada xarunta iyo matoorka dibedda.
Maxaa loo soo gaabiyey Rover Multi-Tooled, wax la mid ah Rover (gaari) qalab badan.
Weli ma uusan dhigin, laakiin wixii aan ku arkay ayaan jeclahay, way dhaqaaqdaa waana ay tooganaysaa. Iyadoo taas uu durbaba ku guuleystay dhibco badan.
Kani waa khad soosaar yar oo lagu dhisayo moodooyinka yaryar ee LEGO®
Isla marka ay soo uruuriyaanba, halkan ayaan kaga tagayaa dareenkayga.
Faa’iidooyinka iyo qasaaraha. Kuwa ugu fiican iyo kuwa ugu xun
Sida dhammaan alaabada, waxay leedahay waxyaabo togan iyo kuwo taban. Waan kugula talinayaa. Runtu waxay tahay in gabdhaheena ay jeclaadeen aniga iyo aniga sidoo kale marka laga reebo dhibaatooyinka qaar iyo wax aan ka faaloon doono, waa wax aad u xiiso badan oo si fudud loo isticmaali karo.
Waxa aan ugu jeclahay ugu yaraan LEGO Boost
In baloogyadu aysan lahayn dad ku hadla iyo dhawaqyada ay ciyaareyso iyo waxa ay diiwaan gelineyso iyada oo loo marayo kiniiniga ama arjiga moobiilka. Waxay luminaysaa nimco badan markii, kadib markaad kahadashay shirkii aad samaysay, kaniiniga aad haysatay la qabtay.
Waafaqid qalab. Iibsashada qalabka robotikada iyo ogaanshaha in kiniinkaagu uusan iswaafaqi karin waa mid ka mid ah cabashooyinka ugu waaweyn ee aan ku arkay internetka. Dhibaatooyin ma qabin, in kasta oo sinnaanta Bluetooth ay dhibaato i siineyso kiniinka Huawei waana inaan ku qasabnaa sida aan ku sharaxay casharkaan.
Qiimaha. Hagaag, waa qiimo sare, waa run, taas oo aan u maleynayo inay u qalanto, laakiin waa inaad hubisaa in caruurtaadu jeclaan doonaan.
Dukumintiga. Shaki la'aan tan ugu xun ee waaya aragnimadii oo dhan ilaa hadda. In kasta oo arjigu kugu hagayo wax kasta oo ay tahay inaad sameyso, ma jirto meel ay ku sharxayaan waxa barnaamij kasta oo barnaamij ah loogu talagalay iyo haddii aadan isticmaalin ama haddii qof kale oo aan ahayn cidda soo uruurisay ay qaadato, ma garanaysid waxaad samaynayso oo leh baloogyo badan.
Waxaan runtii u maleynayaa in arinta dukumiintiyada ay tahay wax ay tahay inay eegaan oo ay ka xaliyaan LEGO.
Waxa aan jeclahay
Waxa aan jeclahay ayaa ah inay u oggolaanayso carruurta inay horumar sameeyaan oo ay wax bartaan si madax-bannaan oo ay aad u jecel yihiin tan.
Intaa waxaa dheer, natiijooyin lagu qanco ayaa dhakhso loo helaa. Iyada oo aannaan hoos u dhigin iyaga
Maaddaama ay tahay LEGO, waxaan sameyn karnaa kala duwanaansho kasta oo aan ka fekeri karno qaybaha. Waxaanan u isticmaali karnaa saddexda baloog ee gaarka ah legos-ka aan ku haysanno guriga shirar kale oo kasta. Waxay ka dhigi doonaan lebenkeena runtii isdhexgal.
Waxay ku habboon tahay LEGO Classic iyo Tecnich
1 Muxuu ka kooban yahay?
2 5 fuulid
2.2 Frankie bisadda
2.3 Gitaarka 4000
2.5 Qalabka dhismaha
3 Faa’iidooyinka iyo qasaaraha. Kuwa ugu fiican iyo kuwa ugu xun
3.1 Waxa aan ugu jeclahay ugu yaraan LEGO Boost
3.2 Waxa aan jeclahay